Apple Store Upper East Side natsangana teo amin'ny banky vazo | Avy amin'ny mac aho
Zava-mahafinaritra: Ny fivarotana Apple East East Side dia natsangana tamin'ny tranokala banky 1920s nohamafisina
vaovao Apple Store en Etsy Atsinanana ambony izay hisokatra anio asabotsy, hanana fotoana ny mpitsidika mahita ny maritrano ara-tantara, ankoatry ny fividianana iPhones sy Apple Watchs. Izany dia satria ilay magazay vaovao izay hita tao amin'ny 940 Madison Avenue dia taloha banky amerikana Mortgage & Trust, izay misy aza a vazy mifono vy avy amin'ny dabilio eo ambanin'ny fivarotana, ary namerina tamin'ny laoniny ny ankamaroan'ny endrika am-boalohany ho an'ny efitrano fampirantiana vaovao i Apple.
Trano Fine Arts izy io, i Apple dia niasa namerina ilay tranobe 1920, chandeliers y Gorodona marbra. Ny ivelany dia mitazona ny endrik'ilay trano tany am-boalohany, Apple dia nametraka a saina mainty misy sary famantarana Apple fotsy, ambonin'ilay fidirana marbra.
Esa vault amin'ny banky nohamafisina, dia eto ambany, ny fisehoan'ny fivarotana, ary lasa a Efitra VIP amin'ny rihana ambany, ho an'ny fivoriana tsy miankina amin'ireo mpanjifan'ny orinasa. Ny tranon'ny banky taloha dia mbola nanamafy vy, misy vy vy sy varavarana mifono vy (Sary etsy ambony).
Tohizo ny endrik'ilay trano tany am-boalohany ary ny fanaingoana ny endriny avy amin'ny Apple Store dia mitovy amin'ny fomba ampiasain'ny mpampiasa iPhone amin'ny personalize ny fitaovany. Hoy i Angela Ahrendts, mpitantana ny varotra ao Apple.
Hanana ilay fivarotana mihitsy aza ora manokana: 09: 00-20: 00 manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, ary ny alahady 11: 00-19: 00.
Ny tsaho momba an'ity Apple Store Upper East Side vaovao ity dia nipoitra herintaona lasa izay ary izao dia ho tena izy. Ny Store East East Side Apple dia misokatra ho an'ny besinimaro amin'ny 13 amin'ny volana Jona, amin'ny 09:00.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Zava-mahafinaritra: Ny fivarotana Apple East East Side dia natsangana tamin'ny tranokala banky 1920s nohamafisina
Nijirika ny Apple Watch izy ireo ary nametraka rindran-damina zanatany [Video]